Daryeelka hooyada ummulida ka dib | Zanzu
Ummulid aka dib
Kaaliyaha caafimaadka caadi ahaan waxay hubiyaan heerkaaga garaaca wadnaha, heerkulka, dhiiga waayida iyo dhererka makaanka.
Afka dhuunta ilma galeenku waxay u yaraataa si aayar ah. Soo ururka muruqa makaanu waxa uu noqon karaa mid aan raaxo lahayn.
Haddii aad jeceshahay tolitaanka, tani waxay noqon kartaa mid aan raaxo lahayn marka aad fadhiisato. Ku maydh biyo siilkaaga maalin kasta si aad u nadiifiso oo aad u yarayso xanuunka.
Hel nashasho kugu filan.
Waxaad lumisaa dhiiga ilaa 6 todobaad ka dib ummulida. Dhiiga u horeeyaa waa casaan. Ka dib waxya noqotaa midan bunni ah. Ka dib, waxay noqon kartaa jaalle ama caddaan. Qadarka dhiigu wuu sii yaraadaa U beddel tuwaalada sixada si caadi ah.
Ilaa 6 todobaad ka dib ummulida, muddada dhiigaaga caadadu way soo noqotaa. Haddii aad naas nuujiso ilmagaaga, waxay qaadan kartaa wakhti dheer.
Muddada uurka, haweenayda muruqyadeeda misigtu way kala baxaan. Ummulida ka dib, muruqyadan waxay u baahanyihiin jimicsi si ay u bogsadaan. Waydii ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka wixii talo ah. Waxaa laguu gudbin karaa daaweeyaha jidhka ee misigta.
Daryeelka dhalmada ka dambeeya
Maalmaha u horeeya ka dib ummulida waxaad taageero ku heshaa guriga oo ka timid caawimada hooyada dhasha. Waxay caawisaa daryeelka ilmahaaga cusub ee dhashay. Caawimada hooyada dhashay waxaa kharashka lagu siiyaa xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering).
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Daryeelka hooyada ummulida ka dib
Xidhiidhkaaga marka aad ilma dhalayso
Ku xidhnaanta ilmahaaga
La noolaanshaha ilmaha